खुसी रहन अरूबाट धेरै आशा नगर्नुहाेस् र यी कुरा कहिल्यै नभुल्नुस् - ज्ञानविज्ञान
शायदै यस्ता कुनै व्यक्ति हाेला, जसले अरूबाट कुनै आशा वा अपेक्षा राख्दैन । हरेक व्यक्तिले कसै न कसैबाट कुनै न कुनै कुराकाे आशा राखेकाे हुन्छ । हरेक व्यक्तिले परिवारबाट, नानीहरूबाट, साथीबाट, आफन्तबाट कुनै न कुनै आशा गरेकाे हुन्छ ।
आशा गर्नु एउटा स्वाभाविक गुण हाे र केही हदसम्म आशा गर्नु पनि पर्छ । नत्र कुनै आशा बिनाकाे जिवन रंगीन बन्न पुग्छ । तर जब हामी अरूबाट धेरै आशा वा अपेक्षा गर्छाै तब यही कुरा हाम्राे दुखकाे कारण बन्न पुग्छ ।
जब कसैले हाम्राे अपेगक्षा पुरा गर्छ, तब हामी खुसी महसुस गर्छाै र जब उसले हाम्राे अपेक्षा पुरा गर्दैन तब हामी आफैलाई दुखी महसुस गर्छाै । त्यसैले अरूबाट धेरै आशा पनि गर्नु हुँदैन । प्राय निम्न कुराहरूमा अरूबाट बढी आशा नगर्नुहाेस् ।
खुसी रहन चाहनु हुन्छ ? यी ६ कुरा कहिल्यै नभुल्नुस्
हरेक मानिस खुसी हुन चाहन्छ । तर धेरैले जीवन जिउने तरिका नजानेर दुःखी हुन्छन् । मनदेखि प्रसन्न ब्यक्ति शारीरिकरुपमा पनि स्वस्थ हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यहाँ जीवनमा खुसी रहन गर्नु पर्ने छ चीजको चर्चा गरिएको छ ।
१ हसाउँने कुराहरु हेर्नुस्
हाँसोले जीवनलाई सहज बनाउँछ । हाँसो रोक्दा घाटा हुन्छ । हाँसोलाई सके सम्म उजागर गर्नुस् । तपाइँलाई हसाउँने चुटकिला, चलचित्र वा कुनै टेलिभिजन शो नियमित हेर्ने गर्नुस् । एक पटक हेरिसकेको चलिचित्र वा शो फेरि हेर्दा पनि कुनै घाटा हुँदैन यदि त्यसले हसाउँछ भने ।
२ बाहिर निस्कनुस्
तपाइँ गाउँमा बस्नु हुन्छ कि ठूलो शहरमा त्यसले खास फरक पार्दैन । तपाइँ बाहिर निस्कनुस् दुनियाँ हेर्नुस् । आसपासमा भैरहेका परिवर्तनले मानिसलाई जीवन उर्जा दिन्छ । यदि नजिकै बगैचा वा पार्क छ भने त्यहाँ केहीबेर बस्नुस् । बाहिर निस्किँदा घाम छ भने त्यसले पनि फाइदा गर्छ । घामबाट पाहिने भिटामिन डीले निराशा र दिक्कपनबाट मुक्ति दिन्छ ।
३ नियमित ब्यायाम गर्नुस्
विहान उठेपछि वा साँझको समयमा यस्तो केही काम गर्नुस् जसले तपाइँको शरीरबाट पसिना छुटोस् । यसले दिमागलाई तेज बनाउँछ । प्रत्येक दिन ब्यायामको लागि समय निकाल्नुस् ।
४ शरीरमा मालिस गर्नुस्
समय समयमा शरीर मालिस गर्नु स्वास्थ्य र आराम दुवै दृष्टीले राम्रो हुन्छ । दिनमा एक पटक शरीरमा हल्का मालिस गर्दा पनि तपाइँलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउँछ ।
५ सुगन्धित तेलको प्रयोग गर्नुस्
स्प्रे वा सुगन्धित तेल लगाउने बानीले तपाइँलाई स्फुर्त बनाउँछ । यसले तपाइँको ब्यक्तित्व पनि आकर्षक बनाउँछ ।
६ सकारात्मक सोंच
सकारात्मक सोंच सुखी जीवनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने कुरा हो । यदि तपाइँ खुसी रहन चाहनु हुन्छ भने हरेक परिस्थितिमा सकारात्मक सोंच राख्नु पर्छ । सकारात्मक सोंच राख्ने क्षमताले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सुखी राख्छ ।
जानकारीका लागी याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला
Don't Miss it नरिवल तेलले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? कति स्वस्थ्यकर छ ? नरिवल तेलको विवाद
Up Next आफूमा सकारात्मक परिवर्तन यसरी ल्यानुहाेस्
अहंकारके के हो ? यसलाई कसरि त्याग्ने ? अनि जीवनमा कसरि अगि बढ्ने ? जीवन उपयाेगी लेख
हामी सबै जीवनमा केहि बन्न केहि प्राप्त गर्न चाहान्छौ । जीवनमा सफल हुन चाहान्छौ तर धेरै मानिसमा एउटा नराम्रो बानि…
के तपाईं आफैलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ ? यसरी जाँच्नुहोस
के तपाईं आफुले आफैलाई माया गर्नुहुन्छ ? यसरी जाँच्नुहोस, प्रेम वा माया गर्ने भन्नसाथ पहिले त हामी प्रेमी/प्रेमिकालाई सम्झन्छौं ।…
यस्ता छन जीवन सुखद बनाउने तरिका
यस्ता छन जिवन सुखद बनाउने ७ तरिका : १. समय अनुकुल व्यायाम गर्नुहोस् रोग लाग्ने खतराबाट मुक्त हुनकालागि सबैभन्दा अचूक…
जाडोमा ध्यान दिनुपर्ने घरेलु तरिका
तातो पानी पिउने जाडो मौसममा चिसो पानी नपिउनु नै राम्रो हुन्छ । तातो पानी पिउने गर्नाले रुघाखोकी नलाग्ने, कफ नजम्ने,…
सेतो पानी बग्ने समस्या र त्यसको परिणाम
पछिल्लो समय प्रायः महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिन थालेको छ । सानै उमेरका महिलामा पनि यस्तो समस्या देखिन थालेको…